ကျွန်တော် အိမ်ကမိန်းမကို စိတ်မပါပဲ အပြင်ကကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ သူ့ကိုပဲ စွဲနေတာ - Mingalarday
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > ကျွန်တော် အိမ်ကမိန်းမကို စိတ်မပါပဲ အပြင်ကကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ သူ့ကိုပဲ စွဲနေတာ
December 26, 2017 MinGaLar Day
အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ သင်သေချာလား။
အမျိုးသား – ဟုတ်ပါတယ်။
အတိုင်ပင်ခံ – ကွာရှင်းပြီး ခုမင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်။
အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမိန်းမက နားလည်ပေးတယ် သည်းခံတယ် တော်တယ်။ ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်ရင် သူ့အတွက် ရက်စက်ရာ ကျမလား။
အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တရားတယ် ရက်စက်တယ်လို့ ဆိုတာတွေ မရှိပါဘူး။ ခု မင်းချစ်နေတာက တခြားမိန်းကလေးဖြစ်နေပြီ။
အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တာ။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒါဆို သူက ပေးဆပ်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတယ်။
အမျိုးသား – ကွာရှင်းပြီး တခြားမိန်းကလေးကို လက်ထက်လိုက်ရင် သူနာကျင်ခံစားရလိမ့်မယ်။
အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်အရပြောရရင် မင်းကို ချစ်နေတဲ့ အချစ်ကို သူမ ပိုင်ဆိုင်နေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအိမ်ထောင် မှာ မင်းက သူ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ် မင်းမှာ မရှိတော့ဘူး။ မင်းကတခြားတစ်ယောက်ကို မင်းရဲ့အချစ်တွေပေးလိုက်လို့။ မင်း သူ့ကို မချစ်တော့တဲ့ အတွက် မင်းဆုံးရှုံးနေတာ နာကျင်မှာ မင်းပဲ။
အမျိုးသား – ကျွန်တော် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သစ်ကို အစပြုတော့မှာ။ သူ့ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးရှုံးတာ။
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းမှားနေပြီ။ သူမ က ဒီအိမ်ထောင်မှာ ဒီအချစ်စစ် တစ်ခုနဲ့ သူလျှောက်လှမ်းနေတာ။ သူ့ရဲ့ အချစ်စစ်ကို သူပေးဆပ်တယ်။ သူ ပျော်တယ်။ မင်းသာ မင်းကိုအချစ်စစ်နဲ့ ချစ်နေတဲ့သူကို မင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာ။
အမျိုးသား – သူမပြောဖူးတယ်။ သူမက ကျွန်တော်ကလွဲပြီး တခြားတစ်ယောက်ကို မချစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီလို စကား မင်းကော ပြောဖူးသလား။
အမျိုးသား – ကျွန်တော်………..
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းရှေ့ကဖယောင်းတိုင် ၃ တိုင်ကို ကြည့်လိုက်။ ဘယ်ဟာ အလင်းဆုံးလဲ။
အမျိုးသား – မသိပါဘူး။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီဖယောင်းတိုင် ၃ တိုင်သာ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုနေမယ်ဆိုရင် ဒီ လူ့လောကမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိတယ်။ဒီ ၃ တိုင်တောင် ဘယ်တိုင်က ပို လင်းပြီး တောက်ပ နေတယ်ဆိုတာ မင်းမပြောနိုင်ဘူး။ အခု မင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်က မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာကိုမင်း ပြောနိုင်လား။
အမျိုးသား – ကျွန်တော်…………
အတိုင်ပင်ခံ – မင်း အခု ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို မင်းယူလိုက်။ မင်းစိတ်နဲ့ ကြည့်လိုက် ဘယ်အတိုင် အလင်းဆုံးလဲ။
အမျိုးသား – ကျွန်တော် ကိုင်ထားတဲ့ အတိုင်ပေါ့ဗျာ။
အတိုင်ပင်ခံ – ကယ် နဂိုနေရာပြန်ထားလိုက်။ ဘယ်အတိုင် အလင်းဆုံးလဲ။
အမျိုးသား – မသိတော့ဘူး။
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းခုနက ယူလိုက်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်က မင်းလက်ရှိ မိန်းမကို ကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲက ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် မင်း သူ့ကို ချစ်နေရင်မင်းစိတ်ထဲမှာ သူဟာအလင်းဆုံး မင်းသာ သူ့ကို စိတ်ထဲမှာ မထားဘူး ။ နဂိုနေရာမှာဆိုရင် မင်းစိတ်ထဲကို မထည့်တဲ့ အတွက် အလင်းဆုံးကို မင်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ချစ်တယ် မချစ်တယ် ဆိုတာ မင်းရဲ့ စိတ်ပါပဲ။
အမျိုးသား – အော်။ ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီ။ တကယ်ကွာရှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလား။ လမ်းမှန်ကို ရောက်အောင် လမ်းညွန်ပြနေတာပါလား။
အတိုင်ပင်ခံ – တကယ် နားလည်ပြီဆိုရင် မင်းရဲ့ စိတ်နဲ့ အလင်းဆုံး ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို မင်းစိတ်နဲ့ သွားရှာတော့…..
အမျိုးသား – ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာ ဘယ်သူအလင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီ။ ကျွန်တော့် မိန်းမပါ။
ဒီ လူ့လောကကြီးမှာ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးပေါ့… တံတိုင်းထဲ နဲ့ တံတိုင်းပြင် ပေါ့။ အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေက အထဲဝင်ချင် အထဲမှာရှိတဲ့ သူက အပြင်ထွက်ချင်။ အ
ထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတွေကလဲ အပြင်ဘက်က ရူ့ခင်းတွေကို ကြည့်ချင်။ ရထား ပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေနဲ့ မကျေနပ်ကြဘူး။ မရောင့်ရဲကြဘူး။ မိုးပေါ်ကကြယ်လေးတွေ
လင်းလက်နေတာကို မက်မောကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မှာ နွေးထွေးတဲ့ ဟင်းနဲ့ စောင့်နေတာကို မမြင်ကြဘူး။ သာမာန်ရိုးကျ နေ့စဉ်လုပ်ရပ်တွေကို ငြီးငွေ့လာတယ်။
အချစ်သစ်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မက်မောလာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အဝေးမှာပဲ ထင်ပြီး နောက်တစ်ယောက် လာခေါ်ဆောင်မှုကို စောင့်စားနေတယ်။.
နောက်တစ်ယောက်ကြောင့် ဘ၀ဟာ စိုပြေလာတယ်လို့ ထင်လာတယ်…. ဒါကို သင်က ကျေနပ်နေမိတယ်….
တစ်ချို့အရာတွေက မသိစိတ်ကနေ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်… စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ အတိုင်း လုပ်ကြတယ်….. ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဖေါက်ပြန်မှုတွေက များပြားလာတော့တာပေါ့…….
အမြိုးသား – ကြှနျတျောကအိမျထောငျရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခွားမိနျးကလေးတဈယောကျကို ရူးရူးမူးမူး ခဈြမိနတေယျ။ အဲဒါဘယျလို လုပျရမလဲ။
အတိုငျပငျခံ – ဒီမိနျးကလေးဟာ သငျ့ဘဝအတှကျ နောကျဆုံး ခဈြနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာ သငျသခြောလား။
အမြိုးသား – ဟုတျပါတယျ။
အတိုငျပငျခံ – ကှာရှငျးပွီး ခုမငျးခဈြနတေဲ့ တဈယောကျကို ယူလိုကျ။
အမြိုးသား – ဒါပမေဲ့ ခုလကျရှိမိနျးမက နားလညျပေးတယျ သညျးခံတယျ တျောတယျ။ ကြှနျတျောဒီလို လုပျရငျ သူ့အတှကျ ရကျစကျရာ ကမြလား။
အတိုငျပငျခံ – အိမျထောငျရေးဆိုတာ တရားတယျ ရကျစကျတယျလို့ ဆိုတာတှေ မရှိပါဘူး။ ခု မငျးခဈြနတောက တခွားမိနျးကလေးဖွဈနပွေီ။
အမြိုးသား – ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ မိနျးမက ကြှနျတေျာ့ကို အရမျးခဈြတာ။
အတိုငျပငျခံ – ဒါဆို သူက ပေးဆပျမှုနဲ့ ပြျောရှငျနတေယျ။
အမြိုးသား – ကှာရှငျးပွီး တခွားမိနျးကလေးကို လကျထကျလိုကျရငျ သူနာကငျြခံစားရလိမျ့မယျ။
အတိုငျပငျခံ – အိမျထောငျအရပွောရရငျ မငျးကို ခဈြနတေဲ့ အခဈြကို သူမ ပိုငျဆိုငျနမေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအိမျထောငျ မှာ မငျးက သူ့ကို ခဈြတဲ့ အခဈြ မငျးမှာ မရှိတော့ဘူး။ မငျးကတခွားတဈယောကျကို မငျးရဲ့အခဈြတှပေေးလိုကျလို့။ မငျး သူ့ကို မခဈြတော့တဲ့ အတှကျ မငျးဆုံးရှုံးနတော နာကငျြမှာ မငျးပဲ။
အမြိုးသား – ကြှနျတျော နောကျတဈယောကျနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျသဈကို အစပွုတော့မှာ။ သူ့ ကြှနျတေျာ့ကို ဆုံးရှုံးတာ။
အတိုငျပငျခံ – မငျးမှားနပွေီ။ သူမ က ဒီအိမျထောငျမှာ ဒီအခဈြစဈ တဈခုနဲ့ သူလြှောကျလှမျးနတော။ သူ့ရဲ့ အခဈြစဈကို သူပေးဆပျတယျ။ သူ ပြျောတယျ။ မငျးသာ မငျးကိုအခဈြစဈနဲ့ ခဈြနတေဲ့သူကို မငျးလကျလှတျဆုံးရှုံးရမှာ။
အမြိုးသား – သူမပွောဖူးတယျ။ သူမက ကြှနျတျောကလှဲပွီး တခွားတဈယောကျကို မခဈြနိုငျတော့ဘူးတဲ့။
အတိုငျပငျခံ – ဒီလို စကား မငျးကော ပွောဖူးသလား။
အမြိုးသား – ကြှနျတျော………..
အတိုငျပငျခံ – မငျးရှကေ့ဖယောငျးတျိုငျ ၃ တိုငျကို ကွညျ့လိုကျ။ ဘယျဟာ အလငျးဆုံးလဲ။
အမြိုးသား – မသိပါဘူး။
အတိုငျပငျခံ – ဒီဖယောငျးတိုငျ ၃ တိုငျသာ မိနျးကလေး ၃ ယောကျကို ကိုယျစားပွုနမေယျဆိုရငျ ဒီ လူ့လောကမှာ မရမေတှကျနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးတှရှေိတယျ။ဒီ ၃ တိုငျတောငျ ဘယျတိုငျက ပို လငျးပွီး တောကျပ နတေယျဆိုတာ မငျးမပွောနိုငျဘူး။ အခု မငျးခဈြနတေဲ့ တဈယောကျက မငျးရဲ့ နောကျဆုံးခဈြနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာကိုမငျး ပွောနိုငျလား။
အမြိုးသား – ကြှနျတျော…………
အတိုငျပငျခံ – မငျး အခု ဖယောငျးတိုငျတဈတိုငျကို မငျးယူလိုကျ။ မငျးစိတျနဲ့ ကွညျ့လိုကျ ဘယျအတိုငျ အလငျးဆုံးလဲ။
အမြိုးသား – ကြှနျတျော ကိုငျထားတဲ့ အတိုငျပေါ့ဗြာ။
အတိုငျပငျခံ – ကယျ နဂိုနရောပွနျထားလိုကျ။ ဘယျအတိုငျ အလငျးဆုံးလဲ။
အမြိုးသား – မသိတော့ဘူး။
အတိုငျပငျခံ – မငျးခုနက ယူလိုကျတဲ့ ဖယောငျးတိုငျက မငျးလကျရှိ မိနျးမကို ကိုယျစားပွုမယျဆိုရငျ အခဈြဆိုတာ ရငျထဲက ဖွဈလာတဲ့ အတှကျ မငျး သူ့ကို ခဈြနရေငျမငျးစိတျထဲမှာ သူဟာအလငျးဆုံး မငျးသာ သူ့ကို စိတျထဲမှာ မထားဘူး ။ နဂိုနရောမှာဆိုရငျ မငျးစိတျထဲကို မထညျ့တဲ့ အတှကျ အလငျးဆုံးကို မငျးတှမှေ့ာမဟုတျဘူး။ ခဈြတယျ မခဈြတယျ ဆိုတာ မငျးရဲ့ စိတျပါပဲ။
အမြိုးသား – အျော။ ကြှနျတျောနားလညျပါပွီ။ တကယျကှာရှငျးခိုငျးတာမဟုတျပါဘူးလား။ လမျးမှနျကို ရောကျအောငျ လမျးညှနျပွနတောပါလား။
အတိုငျပငျခံ – တကယျ နားလညျပွီဆိုရငျ မငျးရဲ့ စိတျနဲ့ အလငျးဆုံး ဖယောငျးတိုငျတဈတိုငျကို မငျးစိတျနဲ့ သှားရှာတော့…..
အမြိုးသား – ကြှနျတျော ရငျထဲမှာ ဘယျသူအလငျးဆုံးလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျောသိပွီ။ ကြှနျတေျာ့ မိနျးမပါ။
ဒီ လူ့လောကကွီးမှာ အိမျထောငျရေးဆိုတဲ့ တံတိုငျးကွီးပေါ့… တံတိုငျးထဲ နဲ့ တံတိုငျးပွငျ ပေါ့။ အပွငျမှာ ရှိနတေဲ့ သူတှကေ အထဲဝငျခငျြ အထဲမှာရှိတဲ့ သူက အပွငျထှကျခငျြ။ အ
ထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတှကေလဲ အပွငျဘကျက ရူ့ခငျးတှကေို ကွညျ့ခငျြ။ ရထား ပိုငျဆိုငျထားတာတှနေဲ့ မကနြေပျကွဘူး။ မရောငျ့ရဲကွဘူး။ မိုးပျေါကကွယျလေးတှေ
လငျးလကျနတောကို မကျမောကွတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျမှာ နှေးထှေးတဲ့ ဟငျးနဲ့ စောငျ့နတောကို မမွငျကွဘူး။ သာမာနျရိုးကြ နစေ့ဉျလုပျရပျတှကေို ငွီးငှလေ့ာတယျ။
အခဈြသဈရဲ့ စိတျလှုပျရှားမှုတှကေို မကျမောလာတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှုတှကေို အဝေးမှာပဲ ထငျပွီး နောကျတဈယောကျ လာချေါဆောငျမှုကို စောငျ့စားနတေယျ။.
နောကျတဈယောကျကွောငျ့ ဘဝဟာ စိုပွလောတယျလို့ ထငျလာတယျ…. ဒါကို သငျက ကနြေပျနမေိတယျ….
တဈခြို့အရာတှကေ မသိစိတျကနေ စိတျထဲမှာ ဖွဈပျေါလာတယျ… စိတျထဲမှာ ဖွဈလာတဲ့ အတိုငျး လုပျကွတယျ….. ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဖေါကျပွနျမှုတှကေ မြားပွားလာတော့တာပေါ့…….
၂၃ နှစ် အရွယ်လေးနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ မြန်မာသံရုံး ပထမ အတွင်းဝန် လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်လာသူ “ခိုင်မာဝင့်ဇင်သန့်”
နောက်ကြောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာလို့ ပရိသတ်တွေ အံ့သြပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီး